थप १८७ जनाले जिते कोरोना, डिस्चार्ज हुनेको संख्या ८६१ पुग्यो - News Birat
काठमाडौं, २९ जेठ-नेपालमा २४ घण्टाको अवधिमा उपचारपछि निको भएर १ सय ८७ जना कोरोना भाइरस संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले देशभरका विभिन्न आइसोलेसन सेन्टरमा उपचार गराइ संक्रमणमुक्त भएर डिस्चार्ज हुनेमा ८ जना महिला छन् भने १ सय ७९ पुरुष जना पुरुष रहेको जानकारी दिएका हुन् ।
देशभर बिहीबारसम्म कोरोना भाइरसलाई जितेर घर फर्किनेको संख्या ८ सय ६१ पुगेको प्रवक्ता डा. गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार डिस्चार्ज हुनेमा ७ सय ७४ जना पुरुष रहेका छन् भने ८७ जना महिला रहेका छन् ।
प्रवक्ता डा. गौतमले २४ घण्टाको अवधिमा थप २ सय ५० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा नेपालमा थप २ सय ३० पुरुष र २० महिला गरी २ सय ५० संक्रमित थपिएका हुन् ।
योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ४ हजार ६ सय १४ पुगेको छ । जसमध्ये ४ हजार २ सय ८५ जना पुरुष छन् भने ३ सय २९ जना महिला रहेका छन् । नेपालका ७२ जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको बिहीबारसम्मको तथ्यांकअनुसार १ लाख १५ हजार ९ सय ३० नमुनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको छ । १ लाख ७८ हजार १ सय ४३ जनाको आरडीटी विधिबाट परीक्षण भएको छ । गत २४ घण्टामा ५ हजार १ सय ९४ नमुनाको पीसीआर विधिबाट र ५ हजार २ सय ६३ आरडीटी परीक्षण गरिएको प्रवक्ता डा गौतमले बताए ।
उनका अनुसार १ लाख ६२ हजार १३ जना देशभरका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा र ३ हजार ७ सय ३८ जना उपचार क्रममा आइसोलेसनमा रहेका छ । हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा १५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
बिहीबार, २९ जेष्ठ २०७७, १७:२२ June 11, 2020 मा प्रकाशित